Japana: Onagawa, ilay tany fonenako fahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2011 4:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, polski, 繁體中文, 简体中文, عربي, বাংলা, English
Niala ny taniny tany Onagawa any amin'ny “préfecture” an'i Miyagi i @kombu_s, mpampiasa Ttwitter ka nifindra tany Sendai.
Indro ny mombamomba azy:
Mandefa tweets momba ny zavatra hitako tany Onagawa aho izao, any amin'ny prefektioran'i Miyagi. Mba araho ny tweets-ko azafady. Azoko tsara fa miahiahy ny tsirairay fa izay hitako ihany no fantatro. Tsy manana vaovao momba ny faritra tsy nandehanako aho na momba ny tsirairay manokana. Nitondra fiara aho nankany ami'ny Toby Fanomezana Fitsaboana Voalohany ary nandeha tongotra hatrany nanivatsiva tamin'ireo korontana ho any amin'ny General Gym aho haka ny fianakaviako. http://twitpic.com/photos/kombu_s
Rehefa tonga soa aman-tsara tany Sendai izy dia namoaka ireo sary nalainy teny an-dàlana tamin'ny 12 Martsa.
Tiako ny hanamarika fa tsy mamaly tweets aho. Izay hitako ihany no fantatro. Izaho dia olon-tsotra izay nandeha naka ny fianakaviany. Tsy manana vaovao aho, na manome ahy adiresy na anarana aza ianao. Ny olona mandefa ity tweet ity dia aty Sendai. Mba araho ny tweet-ko. #onagawa #save_miyagi_onagawa
Ity manaraka ity dia tweets notsongaina, milahatra araka ny nipoirany.
Ny tweet-n'i@kombu_s voalohany momba ny horohorontany dia tamin'ny 10 Martsa:
Nanaitra ahy matetika ny horohorontany, ka reraka aho!
Tamin'ny 11 izy dia nandefa tweet:
Mbola velona aho. Maty anefa ny tanàna, ary mikorontana ambony ambany ny efitranoko.
Tamin'ny 12 Martsa avokoa ny tweet manaraka rehetra avy aminy.
Salama aho. Lasan'ny onjan-drano avokoa ny trano sy ny tanàna nahalehibe ahy. Ity sary ity dia sarin'ny tanàna lehibe iray.
[RT azafady] Ity dia vaovao momba ny tanàn'ny Onagawa any amin'ny prefektioran'i Miyagi. Nitsidika ny faritra voa ireo mponina androany. Nivondrona tao amin'ny General Gym avokoa ireo mpiray tanàna nafindra monina. Tsy mbola misy aloha ny fifandraisana amin'ny finday, satria tsy misy tambajotra ivelan'ny tanàna. Aza matahotra satria hoe tsy afaka miresaka amin'izy ireo mivantana ianao. Minoa fa avotra sao aman-tsara ny fianakavianao.
Tafaverina aty amin'ny tranonay aty Sendai niaraka tamin'ny fianakaviako. Misaotra betsaka, ary miala tsiny nampiahiahy anareo. Misy herinaratra izahay aty.
Mieritreritra ny hanohy hanome vaovao momba an'i Onagawa tanindrazako aho. Angatahiko ianareo mba hamerina hamoaka azy araka izay azo atao. Aza arahina intsony aho raha tsy tianareo ny vaovao alefako. Raha mpiray tanàna amiko ianao ka manana fanontaniana, mba andefaso mailaka mivantana aho. Hovaliako araka izay hitako hatreto izany.
Ireo ny lalàmby ao Onagawa. Nentin'ny rano hatrany amin'ny fasana akaikin'ny sekoly ambaratonga fototra ireo fiaran-dàlamby maitso sy fotsy.
Tokony tamin'ny mitataovovonana teo aho no tonga tany amin'ny General Gym. Nitriatra ny tafon'ny kolejy, ka ny olona rehetra tao dia nifindra tany amin'ny General Gym. Tsy ampy ny sakafo sy ny bodofotsy tamin'izany. Natory tamin'ny tany ny ankamaroan'ny olona, valaka tanteraka.
Ary tamin'ny mitatao vovonana tany ho any, reko fa nisy lasopy “miso” sy “confiture” mandehandeha any, ifampizaraina amin'olona roa na telo. Tsy nisy bodofotsy, ary nirakotra lamba toa “rideau” ny olona. Heveriko fa tsy ampy ny fanampiana natolotra. #save_miyagi_onagawa #onagawa
Tsy nahaloa-peo aho tamin'ny nahita voalohany ny toerana akaikin'ny toerana masina Kumano. Rako-dranomaso ny masoko ary nihomehy tsy ravo aho. Nampitahotra loatra. Na izany aza, niahiahy momba ireo tapaka sy namany tany ivelan'ny tanàna ireo izay nanampy namindra toerana ny olona.
Amn'izao dia tsy mandeha ny findainay, ary tsy miasa koa ny 1seg aty amin'ny faritra misy anay. Tsy dia nazava tsara ny vaovao tamin'ny onjam-peo, ary narary ny foko fa tsy afaka nampandre na iza na iza izahay hoe tsy maty fo aman'aina aty Onagawa. Fantatro fa mampiahiahy ny tsy fahampian'ny fifandraisana amin'ny olona akaiky fa mba matokisa ny fianakavianao.
Noheveriko fa ho voavonjy izahay raha mbola ampy ny vatsy ilain'ireo tsy maty fo aman'aina; bodofotsy, fitaovana fanafanàna, sakafo, rano, ary taratasy fifirana (loza mihitsy ny momba ny trano fivoahana). Ary mila vaovao bebe kokoa izahay! Na ny fahitalavitra na ny finday tsy misy mandeha avokoa. Raha mba nisy fomba afaka nizaràna video sy sarin'ny zava-mitranga ivelan'ny Onagawa mantsy.
(cont)Sisintany aty ary be zokiolona. Zava-dehibe ny video satria tsy ampy ny onjam-peo sy ny gazety ho an'ireo tsy dia mahita tsara na tsy dia maheno tsara. Somary zava-tsarotra ho an'ny antitra ihany ny takelaka ho an'ny fiantsoana mpamonjy voina sy ny laharana fiantsoana mpamonjy voina. Mazava ho azy fa tsy nanana izany ry zareo tamin'ny androny….
Naheno tantara mampivarahontsana avy amin'ny renibeko sy ny namany aho. Na izany aza dia fosafosa miparitaka amin'ny fomba iavahan'ny sisintany izany, ka aleo tsy alefako tweet fa sao tsy mety. Heveriko fa ny ampahany lehibe amin'izany dia fandefasana eritreritra lavitra, arahin'ny tahotra. Na izany aza dia mandeha izany resaka izany amin'izao.
Avy any amin'ny tobim-pitsaboan'i Onagawa, naka sary ny làlana iray feno tsena aho raha nihanika fiakarana nanomboka tany amin'ny sekolin'i Onagawa hatrany amin'ny làlana Marinpal. Raha izaho nandalo iny dia feno trondro manta teny amin'ny tany. http://twitpic.com/48s41e
Efa miresaka momba izany ihany, raha teny an-dàlana ho any amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena (gymnase) aho dia nahita afo kely. Any Ishinomaki, henoko avy amin'ny namako ny harivan'ny 11 Marsa izay nankany Onagawa na dia teo aza ny loza, nahita hazavana mena sy lelan'afo izy. Na dia naniry ny hanao zavatra aza izy, tsy tranga natao hihetsehana izany ka hany heriny dia nandalo fotsiny.
Oadray, lasa teo amin'ny sary ny rantsan-tanako. Hitako tamin'izaho nidina ny tohatra avy any amin'ny toerana masina any Kumano hankany amin'ny tobim-pitsaboan'i Onagawa io. Folaka amin'ny fotony koa ireo andrin-jiro mpanazava làlana.
Somary sarotsarotra ihany ny mijery azy ity, saingy ity ny sarin'ny angidimby an'ny Hery Fiarovana tamin'izy tonga tao amin'ny tobim-pitsaboan'i Onagawa. Nanoro làlana azy ny tompon'andraikitry ny tobim-pitsaboana saingy tsy hitako hoe karazan'olona toy ny inona no tao anatin'izany tobim-pitsaboana izany.
Raha nandeha tany Onagawa izahay, dia nandalo olona nifindra monina maro niala tamin'ny toerana nivondronany tany aloha ka nifindra tany amin'ny [toerana lehibe kokoa toa ny] General Gym ohatra, na ny Fitaizan-jazakely Daiichi. Maro ny zokiolona saingy nifanampy daholo ny rehetra. Ny lehilahy nanampy ny vehivavy sy ny ankizy ary ny antitra mba hihetsika. Tena tanàna mahafinaritra i #onagawa
@kombu_s: 言おうか言わまいか迷っていることがたくさんあって　不安にさせたくてツイートしているわけじゃないから、本当にどうしようって　さっきの中学生について もちょっと悩んだけど、無事でいてほしいからツイートしました　心配ですよね、不安ですよね、本当にごめんなさい #onagawa
Be ny zavatra mandalo ato an-tsaiko sy tsy haiko intsony natokony na tsy tokony holazaiko izy ireny. Tsy mandefa tweet mba hamafy tahotra aho, noho izany, dia manontany tena aho hoe inona no tsara atao. Nisalasala aho ny hitanisa ny amin'ireo mpianatra ao amin'ny kolejy [ny twet efa nalefany teo aloha no tiany resahana eto] saingy nandefa tweet momba izany ihany aho satria heveriko fa avotra soa aman-tsara ry zareo. Iombonako ny ahiahinareo. Tena miala tisny marina tokoa. #onagawa
Ny tweet farany nalefany taorian'ny misasakalina tao Japana.
Oay, tena tokony hatory kely angamaba aloha. Raha misy zavatra tadidiko dia rahampitso alefako tweet. Tafandria mandry daholo!
Lahatsoratra niarahana nanoratra tamini Chris Salzberg.